Online Canton Fair Online Welcome Vashanyi | Lianchuang
Online Canton Fair Online Welcome Vashanyi
Mangwanani ezuva raJune 15 kuGuangzhou, iyo Pazhou Canton Fair pavilion parutivi rweRwizi rwePearl yaive yakanyarara.
Asi pamhepo, kuvhurwa kukuru kweiyo yepamusoro-nhoroondo 127th Canton Fair yakatanga. Kune ino 127th Canton Fair, emabhizinesi makumi maviri nemashanu vakatora chikamu uye anenge 1,8 miriyoni emidziyo yekutengesa kunze yakaratidzirwa munzvimbo makumi mashanu pamhepo yekuratidzira. Iwo mabhizinesi ekutora chikamu anovhura nzvimbo dzawo dzekuratidzira uye mupenyu show. Anopfuura zviuru zvishanu pakuratidzira zvirikuitika panguva imwe chete. Zano 105 rakazara nzvimbo dzekuyambuka e-commerce uye zvinongedzo kumatanho e-commerce mapuratifomu ari kuvambwa panguva imwe chete…
Kubva pakatarisana nechiso kusvika pachiso-skrini
Kune iyo Shenzhen Lianchuang Science uye Technology Park iyo iri 94.6 makiromita kure neCanton Fair pavilion, iyo show show yakagadzirira. Mwenje, mapani uye vashandi vakamirira uye vakatarisira kutanga yekutanga show. Vanotengesa veLianchuang vanogadzira uye vakamirira iyo chiitiko zvichienderana nekurairwa kweyekuratidzwa kwekuratidzira. Pnguva imwechete, ivo vanokokawo vatengi kuti vatarise show live. Mutungamiriri paakadonhedza ruoko rwe 3-2-1, "Mhoroi munhu wese, nhasi tichauya nemi mareshi ekupisa dzimba dzese ...", Mutengesi kubva ku lianchuang heater department anotambira kune vekunze kuChirungu anoratidza nekutanga sumo yakanyanya. zvezvigadzirwa zvichangoburwa, nzvimbo yekutengesa yechigadzirwa, pfungwa yekugadzira, basa rakakosha uye mamiriro ekushandisa. Tichifunga nezvemibvunzo yakamutswa nevatengi pavanoona nhepfenyuro inorarama, mubatsiri weshure anogadzirawo kupindura nenguva uye zvinobudirira uye kushandira pamwe nekubatirana neanomira pamberi pechiso
Mukuwedzera kune show show, Lianchuang inogadzirawo kushandisa VR (chaiyo chaiyo) uye humwe hunyanzvi hunyanzvi kufambisa horo yekuratidzira pachiratidziro. Vatengi vekunze vanogona kupinda muhoro yekuratidzira yeLianchuang VR kuburikidza nekubatanidza kana QR kodhi yekuongorora, kuitira kuti vatengi vanzwe uye vanzwisise zvigadzirwa zvedu mumunhu zviuru zvemakiromita.
Zvinoenderana nesumo, iyo yakakodzera inosanganisira zvikamu zvitatu: yepamhepo yekuratidzira chikuva, kuyambuka e-commerce zone uye yepamoyo show kushambadzira basa. Iyo inopa 24h yepamhepo yepamhepo live show foramu kune rimwe nerimwe bhizinesi uye inopa kukurudzira online, kutenga kubatana uye online hurukuro yekukurukurirana kwevanoratidzira nevatengi.
Iyo Canton kurongeka kana ichienzaniswa neyapfuura Canton kurira, musiyano mukuru ndiyo nzira dzekukurukurirana dzakashandurwa kubva kumeso-kumeso kusvika pachiso-skrini. Kunyangwe kana nekuda kwekuti mune zvakakosha nyaya, nzira yatinotaura yakachinja, asi nerubatsiro rwetekinoroji yegore, rarama uye VR tekinoroji, iro danho pakati pedu rakanyatsoswedera, kutaurirana pakati pedu kwakanyanya uye kunoshanda uye kuri nyore.
Hwakadzika hwakafanana, kudiwa kuri pamusoro
“Vatatu, vaviri, mumwe! Madhipatimendi ese ari pachinzvimbo, tanga… ”Munguva yepamhepo Canton Fair, Lianchuang batai ratidziro kubva June 15 kusvika 17, iyo pasina mubvunzo inonetsa kune vese vashandi vebhizinesi reLianchuang. Mutengesi Mia akaunzwa kwatiri, kuti agadzirire kekutanga kuCanton kurongeka pamhepo, mukuwedzera kudiwa kuronga masosi, props akadai sePOP, KT bhodhi, props uye chiridzwa chakadai seanemometer pamberi, tinofanirawo kugadzirira zvimwe magwaro, akadai sechigadzirwa ratidza vhidhiyo, zvigadzirwa kusimudzira PPT. Panguva imwecheteyo kuitira kuvimbisa mhedzisiro yekurarama kuratidzwa uye kuzadzisa kubatana kwakabatana nemumwe. Pamberi pekuratidzwa kwehupenyu, ivo vanodzokorora zvakare, uye vachifunga kuunza zvakanakisa kurudzira uye zvigadzirwa zvedu kune vatengi pamberi pechiso zvakanyanya.
"Izvi hazvisi chaizvo zvakasiyana kubva kune yakapfuura Canton Fair." Kare, vatengi vaifona kuti vatsvage imba yakatarwa, asi ikozvino vari kutsvaga imba yekutandarira online, kekutanga kuona zvigadzirwa zvekambani. ” Mutengesi Mia akadaro.
Kana paine kusangana, vatengi vanogona kutanga kuronga chinangwa uye nekukurumidza kutaurirana. Panguva imwecheteyo, mutengesi nekupinda muCanton fair platform workbench, anogona chaiyo-nguva yekubvunza kuti akave akagamuchira iyo mirairo, chinangwa chekuraira peji, iwe unogona kuona zvakajeka zita remutengi, chinangwa chehuwandu. Pazuva rechipiri reCanton Fair yepamhepo, Lianchuang akange awana kurairirwa kwakawanda kwakatangwa nevatengi, pakati payo, dhipatimendi reWeapp rakawana tarisiro yekutenga 10,000 pcs ultrathin heater kubva kumutengi weTEKNOTRONIC INTERNATIONAL LIMITED. Kunyangwe iyo yazvino Canton Fair uye yapfuura mafomu akasiyana, asi iwo mamiriro akafanana; Zvakare, online Canton Fair inogonesawo kuchengetedza yekufamba nenguva, nekudaro ichikwezva zvimwe zvitsva zvevatengi zviwanikwa.
Nguva yekutumira: Jun-19-2020